बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको चन्डीगढमा पुत्ला दहन ! | Nepal Ghatana
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको चन्डीगढमा पुत्ला दहन !
प्रकाशित : ४ असार २०७८, शुक्रबार १८:४५
बलिउड अभिनेता अक्षयकुमार अभिनित फिल्म ‘पृथ्वीराज’ रिलिज पहिले नै चर्चामा रहन सफल भएको छ ।
फिल्मको टाइटल विवाद समेत बढ्दो छ । हालै टाइटल विवादले गर्दा विरोधमा उनको पुत्ला जलाइएको हो ।
अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभाका सदस्यले फिल्मको टाइटल परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । यो संगठनले करणी सेनाले भने जस्तै राजाको पुरा नाम ‘सम्राट पृथवीराज चौहान’ टाइटलमा राख्न माग गरेको छ ।
एक महिना पहिले करणी सेनाले फिल्मको टाइटल परिवर्तन गरेर राजाको पुरै नाम राख्न भनेको थियो । करणी सेनाले भनेको थियो ‘फिल्म महान राजपुत राजामा आधारित रहेको छ । शीर्षकले यो तथ्यलाई दर्शाउँदै । सिर्फ पृथ्वीराज राख्नु अन्तिम हिन्दु शासकको अपमान हो ।’ करणी सेनाले फिल्म रिलिज अगाडि आफुहरुलाई देखाउन समेत भनेको छ ।
करणी सेनाका युवा विङ्ग के अध्यक्ष तथा फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौरले भने, ‘फिल्म युनिटले हाम्रो सल्लाह नमाने परिणाम पनि भोग्नुपर्छ । फिल्म ‘पद्यावत’ को दौरानमा सञ्जय लीला भंसालीको जस्तै परिणाम भोग्न यो फिल्मका निर्माता पनि तयार हुनुपर्छ ।’
‘पृथ्वीराज’ यशराज फिल्मको पहिलो ऐतिहासिक फिल्म हो । फिल्मको परिकल्पना ‘चाणक्य’ नामक दुरदर्शन धारावाहिक बनाउने निर्देशक चन्द्र प्रकाश द्धिवेदीले गरेका हुन् । सञ्जय दत्त र सोनु सुद पनि फिल्मको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् ।
आमाको निधनले सहनै नसक्ने पीडा महशुश गरिरहेको छु : अक्षय कुमार
अक्षयकुमारको ‘बेलबटम’ अमेजनले किन्यो